Kitra – Liga espaniôla: Nifarana ny tantaran’i Antoine Griezmann tao amin’ny Colchoneros
mercredi, 15 mai 2019 11:22
Nampahafantatra ny klioba nilalaovany ilay mpilalao baolina kitra Frantsay, Antoine Griezmann fa tsy hisalotra ny akanjo mena sy fotsy fanamian’ny Colchoneros intsony izy amin’ny taom-pilalaovana manaraka. Nanamafy izany ny klioban’ny Atlético de Madrid omaly.
Tamin’ny 2014 i Griezmann no tonga tao amin’ity klioba espaniôla Atlético de Madrid ity. Efa mahoraka amam-bolana vitsy izay fa dia hilalao ao amin’ny FC Barcelone indray i Antoine Griezmann amin’ny taom-pilalaovana ho avy.
« Grizi », « Grizou » na koa « Petit Prince », solon’anarana fiantsoana an’i Antoine Griezmann avokoa ireo. 28 taona izy ankehitriny, ary isan’ireo Frantsay 23 lahy notsongain’i Didier Deschamps nandrombaka ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra ny taona 2018 izy.